​सामाजिक सञ्जालमा जोक हेरेर धेरैपटक हाँस्नुभयो होला, तर कसले बनायो थाहा छ ?
Friday, 15 Mar, 2019 12:52 PM
सामाजिक सञ्जालमा मिम बनाएर हँसाउने धेरै छन्, तर उनीहरूलाई थोरैले मात्र चिन्छन्। कसले बनाउँछन् चित्रमा हास्यव्यङ्ग्यका यस्ता सामग्री ? बिबिसी नेपाली सेवाले उनीहरुसँग कुरा गरेर भिडियो रिपोर्ट तयार पारेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :